सुवास नेम्वाङलाई सभामुख बनाउने ओली र प्रचण्डको सकारात्मक सोच ! :: Nepal Post Dainik सुवास नेम्वाङलाई सभामुख बनाउने ओली र प्रचण्डको सकारात्मक सोच ! | Nepal Post Dainik
सुवास नेम्वाङलाई सभामुख बनाउने ओली र प्रचण्डको सकारात्मक सोच !
December 6, 2019 मा प्रकाशित
काठमाडौ २० मंसिर । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङलाई सभामुख बनाउन पार्टीका अध्यक्षद्वय सकारात्मक भएका छन् । अध्यक्षद्वयबीच कार्यविभाजन र मन्त्री हेरफेरकै समय दुईजनाबीच सभामुखको बारेमा पनि लगभग सहमति भएको स्रोतको दावी छ तर अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले ‘आफ्ना पक्षका नेताहरुसँग कुरा गर्न बाँकी रहेको कारण’ त्यसलाई अन्तिम रुप दिन सकेको छैन ।
त्यही भएर तत्कालिन माओवादी पक्षका नेताहरुले सभामुखमा दावी गरिरहेका छन् । त्यसमा देव गुरुङ, अग्नी सापकोटा, हरिबोल गजुरेल, पम्फा भुसाल, ओन्सारी घर्तिमगर लगायतले सभामुखका लागि दाबेदारी पेश गर्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्री ओली सरकारको काम गर्न र गराउन आफूले चाहेको व्यक्ति सभामुख हुनुपर्ने अडानमा छन् । रातोपाटिबाट